Dirqaalee jechoota wayita barreessitu xumuradhaaf yeroo hunda umuun qindeessi.
Jecha xumuraa dandeessiisi
Jechoota yeroo hedduu fayyadaniiti Ofumaan jecha erga qubeewwan sadi kan qubeewwan sadan jalqabaa jecha kuufama walisimu barreessiteen boona xumuura.
Yoo sirna tuqaalee jecha boodatti dabaluu dhiifte, LibreOffice iddoo dabala. Iddoo bataluma jecha ittaanuu barreessuu jalqabduu ida'ama.
Akka qacceetti mul'isi
Jecha xumuurame akka Deeggarsa Qacceetti agarsiisa.
Jechoota yeroo hunda tarreetti fayyadan ida'a. Jecha tarree jecha xumuraa irraa haquuf, jecha fili, ittaansuudhaan Galfata Haqii cuqaasi.
Yeroo galmee cuftu, jechoota tarree biroo keessatti wallitti qabamanii jiran haqi.
yemmuu dandeessistu, tarreen yoo galmee ammee cuftu ni qulqull`a. Yemmuu dandeessisuu dhiistu, jechi ammee akka galmeewwan birrootii jiraatu taasisa, erga galmee ammee cufteen booda. Tarree hanga LibreOffice keessa baatutti jireessa ta'a.
Furtuu xumura jecha Ofnaa fudhachuuf fayyadamuu barbaadde fili.
Xumura jecha akka didu gochuuf Dhiisii dhiibi.
Dheerina. jecha xiqqaa
Dheeriina jecha xiqqaa jechi amala xumura jechaaf akka ilaalamu galchi.
Lakkoofsa guddaa jechoota tarree xumura jechaa keessatti kuussuu barbaadde galchi.
Tarree xumura jechaa
Jechoota filataman tarreessa. Tarreenis hanga galmee ammee cuftutti gataa'aadha. Galmeewwan biroo tursa ammee keessatti tarree jirreessa taasisuuf "yeroo cufiinsa galmee tarree booda galmee biroo keessatti fayyadu olkaa'i" fili.
Yoo dirqalli too'ata qubeeffannoo ofumaan danda'e jechoota too'annoo qubeeeffannootiin fudhatama argatan qofatu sassaabame.
Jecha ykn jechoota tarree Xumura Jechaa irraa filataman haqa.
Title is: Jecha xumuuraa